मंसिर ३ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईंको आजको राशिफल | Bharosha News
Home राशिफल मंसिर ३ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईंको आजको राशिफल
मंसिर ३ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईंको आजको राशिफल
चोटपटक लाग्न सक्छ । वादविवाद हुने सम्भवान छ । आलोचना गर्नेहरु प्रशस्त हुनेछन् । मनमा अशान्ति छाउनस सक्छ । यात्रा सुखद ।
आलोचना गर्ने गोप्य शत्रुहरू सक्रिय हुन सक्छन् ध्यान दिनुहोला । सरकार,प्रशासन वा अड्डाअदालतका काममा पनि विघ्न हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा सिनियर्स हरूसँग सम्बन्ध बिग्रने तथा नचाहेको फाँट वा कामको जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ ।
अनावश्यक झमेलामा फसिने सम्भावना छ । मानसिक तनाव बढ्ने छ । पारिवारिक कलहको सम्भावना, पति–पत्नीबीच विवाद होला ।
स्वास्थले साथ दिने हुँदा शाहसिलो काम गर्न आट आउनेछ । प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरुलाई हराई परिणाममूखि नतिजा निकाल्न सकिनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भएर जानेछ । मामा तथा मावलिबाट तपाईको काममा सहयोग हुनेछ ।
पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ । आर्थिक लाभको सम्भावना छ । मिष्ठान्न भोजन हुनेछ । वैदेशिक यात्राको सम्भावना देखिन्छ ।
आफ्नो भन्दा अरुकै काममा समय बित्ने हुँदा आफ्नो काम भने थाति रहनेछ । आमा तथा आफन्तसँग छुट्टिनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । पढाइ लेखाइमा मन नजाने हुँदा अरुभन्दा पछि परिनेछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउन सक्छ ।
जागिरमा पदोन्नतति होला । व्यापारमा फाइदा हुने देखिन्छ । प्रेम सफल हुनेछ । आफन्तहरुसँगको भेटघाटले मन प्रफूल्लित होला ।
खानपानमा ध्यान नदिदा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउनेछ । आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन चालिएका कदमहरु बिफल हुने हुदा दैनिकी प्रभावित हुनेछ । बोल्दा वा कुनैपनि निर्णय गर्दा ख्याल गर्नुहोला गलत अर्थ लगाएर फसाउनेहरु हावि हुनेछन् ।
धार्मिक कार्यमा मन लाग्नेछ । लामो दूरीको यात्रा नगर्नुहोला ।अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ ।आर्थिक लाभको सम्भावना छ । मिष्ठान्न भोजन हुनेछ । वैदेशिक यात्राको सम्भावना देखिन्छ ।
अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ । पारिवारिक कलहको सम्भावना छ । स्वास्थयमा समस्या देखिन सक्छ । वैदेशिक यात्राको योग छ ।
आम्दानिका नयाँ बाटाहरु पहिल्याउदै मनग्गे रुपैया पैसा कमाउन सकिनेछ । सरकारी धन तथा पैत्रिक सम्पति हात लागि हुने योग रहेकोछ । अधुरा तथा पुराना कामहरु फत्ते हुने तथा नयाँ प्रकृतिका काम शुभारम्भ गर्न सकिनेछ ।
व्यापारमा हानी हुने योग छ । राजनीतिमा शुभ देखिन्छ । सामाजिक कार्यबाट लाभ मिल्नेछ । आकस्मिक धनमालको लाभ हुने योग छ ।
Previous articleनेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १७ संक्रमितको मृत्यु
Next articleछठ पर्व आजबाट शुरु
मंसिर २६ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईंको आजको राशिफल
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । अभिभावकवर्ग वा विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुनाले समयमा नै...
मंसिर २३ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईंको आजको राशिफल
भरोसान्युज सम्बादाता - December 8, 2020
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) हठ गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउनेछ भने कमिकम्जोरी ढाकछोप गर्न खोज्दा थप घाटा लाग्नेछ । अग्रज तथा आफन्तसँग...
मंसिर २१ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईंको आजको राशिफल
भरोसान्युज सम्बादाता - December 6, 2020
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) व्यापारमा मन्दि आउने तथा सामानहरु विग्रन सक्छ । श्रमको राम्रै मूल्यांकन भए पनि प्रतिफल तत्कालै प्राप्त हुने...
आज मंसिर २० गते, यस्ताे छ तपाईंको आजको राशिफल
भरोसान्युज सम्बादाता - December 5, 2020
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) अन्यकाममा व्यास्त हुँदा खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्र कमजोर रहने तथा पढाइ लेखाइ बिग्रनेछ । अधुरो काम पूरा...
यस्ता छन् आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय !
काठमाडौं : कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यकारी निर्देशकमा डा. दीपक भण्डारी नियुक्त भएका छन् । आइतबार बालुवटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीलाई...
पछिल्लो २४ घण्टामा यती धेरैले जिते कोरोना
काठमाडौं- पछिल्लो २४ घण्टामा थप २,३४० जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म ६७ हजार...
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गए दसैँमा नयाँ नोट नसाटिने
भरोसान्युज सम्बादाता - September 1, 2020
यस पटक दसैँमा नयाँ नोट वित्तरण गर्ने ÷नगर्नेमा राष्ट्र बैङ्क नै अन्योलमा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क मुद्रा व्यवस्थापन विभागका रेवती...